အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော အာဗြဟံသည် Cassetta ။ ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ်ပာယျ, ဇာစ်မြစ်, ထိုအမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော အာဗြဟံသည် Cassetta ၏လိုက်ဖက်တဲ့။ အားလုံးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ။
နာမည်အများစုမှာဘုံနှင့်အဆန်းမျိုးရိုးအမည် အာဗြဟံသည် ။
အမညျနှင့်အတူအသုံးအများဆုံးနှင့်ဆန်းအမည်များ Cassetta ။
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို အာဗြဟံသည် ။ ပထမအမည်ကို အာဗြဟံသည် ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ အာဗြဟံသည် ။
အခြားဘာသာစကားများ, စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်မျိုးကွဲ, ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမျိုးကွဲ အာဗြဟံသည် ၌ဤပထမဦးဆုံးနာမည်။
အာဗြဟံသည် ပတျသကျ. အလှနျသေးနုအမည်များ။
သင်ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ အာဗြဟံသည် စီရင်သလဲ?
ဘယ်လိုပထမအမည်ကို အာဗြဟံသည် Learn အခြားတိုင်းပြည်တွင်အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပထမအမည်ကိုမှကိုက်ညီ။
အာဗြဟံသည် မျိုးရိုးအမည်နှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်အမည်။
အာဗြဟံသည် အခြားအပထမဦးဆုံးအမည်များနှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်။
အာဗြဟံသည် အကောင်းဆုံးနာမကိုအမှီအဓိပ္ပါယ်များ: အရည်အချင်း, ဒေါသ, စေတနာစိတ်နှင့်, စေ့စေ့နားထောင်, ခေတ်သစ်. ရယူ အာဗြဟံသည် နာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို.
အာဗြဟံသည် ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ. This name may be viewed either as meaning "father of many" in Hebrew or else asacontraction of Abram and הָמוֹן (hamon) "many, multitude" ရယူ အာဗြဟံသည် ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ.
အာဗြဟံသည် name ကို ပတျသကျ. အလှနျသေးနု: Abe, Avi, Braam, Bram. ရယူ အာဗြဟံသည် များအတွက်အမည်ဝှက်.
ကူးယူမှတ်တမ်းတင်သို့မဟုတ်ဘယ်လိုပထမအမည်ကိုအသံထွက်ဖို့ အာဗြဟံသည်: AY-brə-ham (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်), AH-brah-hahm (ဒတျချြတွင်). အာဗြဟံသည် စီရင်ဖို့ကိုဘယ်လို.
အာဗြဟံသည် ဘို့ပြောရလျှင်အမည်များကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ: အာဗြဟံသည်, Aabraham, Aapo, Abraam, Abraão, အာဗြံ, Abramo, Avraham, Braam, Ebrahim, Ibragim, Ibraheem, Ibrahim, Ibrahima, Ibro, Ibrahim. ရယူ အာဗြဟံသည် အခြားဘာသာစကားများ.
နာမည်အသုံးအများဆုံးမျိုးရိုးအမည် အာဗြဟံသည်: Das, Ori, Morrisroe, Jaivoilowski, Juren. ရယူ နာမည်မျိုးရိုးအမည်စာရင်း အာဗြဟံသည်.
နောက်ဆုံးအမည်နှင့်အတူအသုံးအများဆုံးအမည်များ Cassetta: အာဗြဟံသည်, Rudolph, Booker, Jospeh, Young, အာဗြဟံသည်. ရယူ Cassetta နှင့်အတူသွားသောအမည်များ.
အာဗြဟံသည် Cassetta အလားတူအမည်များနှင့်မျိုးရိုးအမည်
အာဗြဟံသည် Cassetta Abe Cassetta Avi Cassetta Braam Cassetta Bram Cassetta အာဗြဟံသည် Cassetta Aabraham Cassetta Aapo Cassetta Abraam Cassetta Abraão Cassetta အာဗြံ Cassetta Abramo Cassetta Avraham Cassetta Ebrahim Cassetta Ibragim Cassetta Ibraheem Cassetta Ibrahim Cassetta Ibrahima Cassetta Ibro Cassetta Ibrahim Cassetta